VLC nnyemaaka, Wondershare Video Converter Ultimate bụ otu n'ime a obiọma, mgbe anyị na-ekwu ihe ndị magburu onwe nkwado na VLC. Nke a bụ n'ezie, gị zuru ezu kit maka Video ahụmahụ na nwere ike dị ukwuu aka ụdị nile nke nsogbu ndị na-egwu egwu videos.
Nkebi nke 1: Nyere VLC na-egwu ndị ọzọ faịlụ
Part 2: tọghata VLC faịlụ ka a otutu faịlụ
Part 3: Download fim ma ọ bụ vidiyo maka VLC Media Player
Ọ bụrụ na, VLC Nwela gburu, n'oge ebre nke otu ụdị video, na Wondershare Video Converter Ultimate abịa nnapụta. Ọ nwere ike tọghata niile iche iche nke vidiyo si na otu ụdị nke ọzọ na ihe kasị mma banyere ya bụ na akakabarede-ewe oge. Na faịlụ nkwado nke ihe karịrị 150, o nwere ike tọghata ọ bụla video usoro ọ bụla ọzọ video Ọkpụkpọ na N'ihi ya, na-enyere VLC Media Player si ihere. Ọ bụ kwesịrị inwe nnyemaaka maka VLC Media Player. The kwesịrị ịrịba ama n'ókè nke Wondershare Video Converter Ultimate bụ na Nchigharị bụ na gburugburu ugboro 30 ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ọzọ software nke otu genre.
Nkebi nke 2: tọghata VLC faịlụ ka a otutu faịlụ
The Wondershare Video Converter Ultimate na-dị nnọọ ndị dị ike ka ngwá ọrụ iji akakabarede usoro ga-eme ngwa ngwa. Ha tọghata VLC faịlụ ka a otutu Files, nke na-abịakwute oké ojiji e mesịrị na ọ bụla ọnọdụ. Wondershare Video Converter Ultimate Enyere VLC na-egwu na tọghata MTS faịlụ. Na-egwuri egwu Video nile di iche iche na VLC Player-aghọ mfe na software na zuru okè aka, e nweghị ụjọ bụrụ na, ọ bụla video na-enwe nsogbu; dị ka wondershare Video Converter Ultimate rectifies ya na oge.
Converting VLC faịlụ ka MP4 Files bụ otu ndị ọzọ ihe, nke ị nwere ike mkpa iji na-egwu ha na gị na smart ekwentị. Na nke a dịruru ná njọ, ndị Wondershare Video Converter Ultimate abịa na enyemaka.
Mgbe ị na-eji VLC, ị chọrọ bụ na-emeghe VLC Media Player, na mgbe ahụ na ịpị n'elu navigation mmanya, na pịa na "Media" mgbe, nke ga-emeghe a obere Dropbox.
Mgbe ahụ a Dropbox anyị kwesịrị pịa na "Open Multiple File" taabụ,-echere ruo mgbe menu ga-egosi na anyị na ihuenyo.
Na menu, pịa "Tinye" button, ma họrọ faịlụ gị mkpa iji tọghata. Mgbe nke a mkpa ka ị pịa na akụ, ugbu nso "Play" button. Mgbe ahụ dị nnọọ Pịa na a akụ, nke ga-emeghe a Dropbox. Mgbe ahọrọ a njikọ, na-akpọ "tọghata".
Ndabere ntọala ga-apụta nke-enye gị ohere ịgbanwe ntọala bụrụ na ị chọrọ ya ka; ma ị nwere ike dị nnọọ na-aga site na-agafe agafe anya na pịa na mmalite. Gị na usoro nke akakabarede amalite. Nke a bụ nnọọ ogologo nzọụkwụ, nke na-agụnye aga site ntọala niile na wdg Ị pụrụ ịhụ snapshots maka otu na nwere ike ikpebi ọ bụ ka a ogologo usoro ime otú ahụ.
Na Wondershare Video Converter Ultimate, niile ị chọrọ bụ mbubata VLC faịlụ ka VLC ka MP4 video Ntụgharị maka akakabarede, Họrọ MP4 dị ka mmepụta format, tọghata VLC ka MP4 ugbu n'aka nri n'akụkụ na ala na usoro a na-eme.
Dị ka hụrụ si snapshots, ị nwere ike mfe ekpe ikpe na usoro nke akakabarede site Wondershare bụ buturu nnọọ mfe.
Nkebi nke 3: Download fim ma ọ bụ vidiyo maka VLC Media Player
Na Wondershare Video Converter Ultimate, ị nwekwara ike ibudata videos maka VLC Media Player si YouTube na ndị ọzọ na Video Ịkekọrịta nrụọrụ. Niile ị chọrọ bụ iji nweta YouTube ma ọ bụ ihe ọ bụla weebụsaịtị na nchọgharị, wee pịa "Download" buttons nke n'elu nke videos iji budata ha.
Ị nwere nwekwara ihe ọzọ nhọrọ nke nbudata usoro site na-edegharị ihe video URL na adreesị mmanya na mgbe ahụ ọkụkụ "Tinye URL" button na n'aka ekpe iji Tapawa URL n'ebe ahụ.
Mgbe ahụ, pịa 'ok' iji tinye ya na download ndepụta na ị na-eme. Ị pụrụ ịhụ snapshots maka otu dị ka n'okpuru.
Mmechi: Anyị nwere ike sị na Wondershare Video Converter Ultimate bụ kwesịrị inwe software maka ndị mmadụ. Ọ na-abịa dị ka oké inyere ha aka nke ndị na-eji VLC Media ọkpụkpọ na-enye oké nkwado na dị iche iche ufodu.
Na interface nnọọ mfe iji, ọbụna a nwa nwere ike iji ya na-enweghị ihe ọ bụla tupu ahụmahụ. Na mfe iji interface na ezi doro anya obibia na-emecha ọ bụla ụdị ọrụ, software bụ onye ọ hụrụ n'anya maka ndị niile gburugburu ụwa. A ga-enwe ngwá ọrụ, Wondershare Video Converter Ultimate nwere ike ime ebube maka gị. Na iche iche nke nhọrọ dị ke ofụri ubi ma ọ bụ a akakabarede ma ọ bụ nbudata, ngwá ọrụ a nwere ike mezue ihe aga-eme na ukwuu ala.
FLAC Files Issues na VLC na ha njikwa
> Resource> VLC> The Ị-kwesịrị-nwere VLC nnyemaaka, Wondershare Video Converter Ultimate